टिकटकमा भाइरल हुन युट्युबेले गरेको अपराध र राउटे युवतीमाथिको बलात्कार ! - नेपालबहस
टिकटकमा भाइरल हुन युट्युबेले गरेको अपराध र राउटे युवतीमाथिको बलात्कार !
| १५:०७:५० मा प्रकाशित
बुद्धले भनेका छन्– “हाम्रो मस्तिष्क नै सबै थोक हो । हामी जे सोच्दछौं त्यही बन्दछौं ।” मानव एउटा सर्वश्रेष्ठ चेनतशील प्राणी हो तर जब जब मानिसले आफ्नो मानवीय चेतना गुमाउँछ र अरुमाथि गिद्धे नजर लगाउन पुग्छ तब तब त्यसको विनाश हुने समय अवश्य आउँछ ।
समाजमा त्यस्ता सोच पालेर बसेका मानवले जनावरभन्दा तल्लो स्तरसम्म गिरेर तुच्च सोच र विचार राखेर अघि बढ्छ भने त्यसको हविगत एकदिन छरप्रष्ट हुन्छ । प्रसंग भखरै मात्र राउटे युवतीहरु माथि भएको यौन दुर्व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै ती युवतीहरुको न्यायको लागि आवाज उठान गर्न खाजिएको हो । यो आवाजलाई कानुनी कठघरा समक्ष पुराउन आम नेपाली जनताहरु एकजुट हुन जरुरी छ । होइन भने राउटे युवतीहरु माथि भएको यौन दुर्व्यवहार तुईएर जानेछ ।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका ११ आँपसोती जनैघाटमा बस्दै आएका राउटे समुदायका दुई युवतीमाथि शनिबार राती स्थानीय युवाहरुले यौन दुर्व्यवहार गरेको घटनाले यतिबेला फेरी नेपाली छोरीहरुको जीवन असुरक्षित बन्दै गएको डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भईरहेको छ ।जसले गर्दा पीडित भन्दा पनि पीडकहरुको मनोवल बढ्दै गएको त्यो यौन दुर्व्यवहार घटनाले प्रष्ट देखाएको छ ।
यो त एउटा नमुना मात्र हो, यस्ता यौन दुर्व्यवहारका कारण थुप्रै बालिका तथा महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । तर आजका दिनसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आज खुलेआम यस्ता नरपिचासहरुको जनघनत्व बढ्दै गईरहेको छ । यस्ता कुसोच पालेका संख्याहरु दिनप्रतिदिन बृद्धि हुँदै गएपछि न त परिवार भित्रका महिलाहरु सुरक्षित हुन सकेका छन् न त बाह्य रुपमा रहेका बालिका तथा महिलाहरु सुरक्षित भएर बस्न पाएका छन् । आज हुँदा हुँदा फिरेन्ते जीवन बिताईरहेका लोपोन्मुख समुदाय भित्रका राउटे युवतीहरुलाई समेत त्यस्ता नरपिचासहरुले छाडेनन् ।
यो विषम घडीमा हामी सबै सचेत नेपाली जनताहरुले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । एकातिर लामो समयदेखि कोरोनाको चपेटामा परेर बाँच्न बाध्य भएका छौं भने अर्कोतिर लकडाउनका क्रममा सयौं बालिका तथा महिलाहरु घरेलुहिंसा तथा यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुनु परेको छ । तर दोषी खुलेआम छाती फुलाएर हिडिरहेको छ । तर सरकार मौन छ ।
हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरो हो, आजसम्म पनि निर्मला पन्त लगायत थुप्रै यौनहिंसामा परेका घटनाहरु गुमनाम पारिएका छन् । ती घटनाका दोषीहरुलाई पत्ता लगाएर कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा हरेक नेपाली छोरीहरु अहिले पनि आफ्नो अस्मिता रक्षाको लागि डरत्रासमा बाँच्न विवश छन् । तर केही पुरुषका लागि यस्ता कुरा सामान्य हुन सक्छ किन कि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको यस्ता यौनजन्य हिंसाले स्पष्ट देखाएको छ ।
राउटे युवतीहरु ती नरपिचासहरुको फन्दामा पर्नुको मुख्यकारण पनि जब युटुवेहरु र केही संघसंस्था भनाउँदाहरु आफू भाइरल हुनको लागि राउटे बस्ती प्रवेश गरे तबदेखि नै ती युवतीहरुमाथि हिंसा भईरहेको थियो । कतिपय युटुवेहरुलाई रातारात टिकटकमा भाइरल हुनको लागि पनि राउटे बस्तीमा गएर जर्बरजस्ती उनीहरुको इच्छाविपरित भिडियो बनाइएको थियो । ती अन्जान राउटे युवतीहरुलाई के थाहा समाजमा यस्ता नरपिचास र गिद्धे सोच भएका मानिस पनि हुन्छन् भनेर । जसले गर्दा आज त्यस्ता कुमति भएका पिचासहरुको फन्दामा पर्नु भयो ।
लेखिकाले यो आलेख लेख्दै गर्दा जब युटुवेहरु ६–७ महिना अगाडि राउटे बस्तीमा पसेर ती युवतीहरुको भिडियो बनाएर टिकटकमा जताततै पोष्ट गर्दै थिए । कुनै भिडियोमा राउटे युवतीहरुले क्वाटर रक्सी पनि खान्छौं भन्ने भिडियो पनि थियो । त्यो भिडियो हेरेपछि त्यही बेला नै लेखिकाको मनमा चिसो पसेको थियो । जब मानिस होसमा हुँदा त यो समाजका कुमतिहरुले महिलाको इज्जतलाई बाँकी राख्दैन भने क्वाटर रक्सी खाएर विहोश भएको बेला के राउटे युवतीले आफ्नो अस्मिता जोगाउन सक्छन् ? त्यतिबेला नै लेखिकालाई ती युवतीको बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको थियो ।
सायद अन्य नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले पनि ती राउटे युवतीहरुको अस्मिताको बारेमा सोचेको हुनुपर्छ । तर आज हाम्रा अगाडि खुलेआम राउटे युवतीहरुलाई रक्सी खुवाएर रक्सीको नसामा मातिएर उनीहरुको अस्मिता लुट्ने काम भएको छ यो घोर अपराधिक कार्य हो । यस्तो अपराध गर्ने जोसुकै किन नहोस्, त्यस्ता कुमतिहरुलाई कदापि छाड्नु हुँदैन ।
राउटे समुदायका चेलीहरुको यो दिनदशा हामीले देख्नु पर्दा हामी सबैको मन कट्ट खाएको छ । तर के गर्ने ? सरकारको ध्यान भने सत्तातिर मात्र छ । देशमा ऐन नियम कानुन सब छ तर पनि आजका दिनसम्म राज्य न त राउटे समुदायको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न सक्यो न त ती राउटे युवतीहरुको अमिस्ता नै जोखाउन सक्यो । विश्व आज विज्ञानको युगले फड्को मारिसकेको छ तर आज हाम्रै देशभित्र रहेका राउटे समुदायहरुलाई राज्यले उनीहरुको भावनालाई समेटेर परिवर्तन नै गर्न सकेको छ न त प्रयास नै गरेको छ ।
आफ्नो देशको नागरिक कसरी कहाँ, कुन स्थानमा, कस्तो अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर उनीहरुको मनोभावना मुताविक उनीहरुलाई राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा दिएर सुरक्षित गर्न सकेको भए आज यो दिनदशा देख्नु र सुन्नु पर्ने थिएन । आज राउटे युवतीमाथि जुन घटना घटेको छ यो घटनाको दोष राज्यले लिनुपर्छ । राज्य भनेको आम जनताको अभिभावक हो ।राज्यको काम भनेको आफ्नो जनताको सेवा र सुरक्षा दिनु हो तर राज्य निरीह बन्दै गईरहेको छ । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । खाली कुर्सीको मोहमा फसेर सत्ता र शक्तिको दोहनमा बस्नु सरकारको काम होइन ।
अतः अपराधीको कुनै रुप रंग, जात धर्म, वर्ग हुँदैन । राउटे युवती माथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने त्यस्ता यौन पिपासुलाई आजीवन कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ । ताकि भावी सन्ततिले पनि यस्ता नरपिचास कुमति भएका व्यक्तिहरुको शिकार बन्न नपरोस् । हामी मानव जाति यो पृथ्वीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौ भने अलिकति भएपनि हामी भित्र मानवीय भावना र दया माया हुन जरुरी छ । महिलालाई केवल यौन सन्तुष्टि दिने वस्तकाु रुपमा हेरिनु हुँदैन । अर्को कुरा सरकारले तत्काल ध्यान दिनु पर्ने विषय टिकटक आज भोलि निकै नै प्रदुषित हुँदै गईरहेको छ ।
विदेशीहरुको त कुरै छाडौं , नेपालीहरुले पनि अश्लिल भिडियो पोष्ट गरिरहेका छन् । यसले समाजमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । बलै चाइनाले टिकटक आविष्कार गरयो तर त्यसको सही प्रयोग भन्दा पनि बढी दुरुपयोग भएको भिडियाहरुे देख्न पाईन्छ । जसले गर्दा अब आउने दिनमा टिकटक नेपाली प्रयोगकर्ताले कुन हदसम्म चलाउन पाउने भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोंच्न जरुरी छ ताकि भोलि गएर पछुताउन नपरोस् ।
आज यही टिकटककै माध्यमबाट राउटे युवटीहरुले आफ्नो अमिस्ता गुमाउन पुगेका छन् । भोलि राउटे युवतीहरु मात्र होइन आफ्नै छोरी बहिनीको इज्जत जान सक्छ । बेलैमा राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ । स्वंम आम नेपाली जनताहरु पनि यस्ता कुघटना हुन नदिनको लागि सचेत हुनुपर्छ ।
सामूहिक बलात्कारका अभियुक्त १४ वर्षपछि घरैबाट पक्राउ ३ दिन पहिले
कञ्चनपुरमा १९ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार १ हप्ता पहिले
सामूहिक बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाउन दबाब ३ हप्ता पहिले
नाबालिका बलात्कार अभियोगमा ५३ वर्षीय गन्धर्व पक्राउ ४ हप्ता पहिले
अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयरमा असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने ९ मिनेट पहिले
नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ३ लाख १७ हजार कित्ता खरीद माग ३२ मिनेट पहिले
कुमारी बैंकद्धारा मेलम्चीका बाढीपीडितलाई सहयोग १७ घण्टा पहिले
बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई चार लाखको स्वास्थ्य सामग्री ४ हप्ता पहिले
कोभिड सहायता केन्द्रबाट ३०० भन्दा बढी संक्रमित लाभान्वित ३ हप्ता पहिले
म्याग्दीको नयाँ पर्यटकीय स्थल लभ्लीहिलमा हावाबाट बिजुली ४ हप्ता पहिले
बन्दाबन्दीमा रोकिएका फर्म दर्ता र नवीकरण पुनः सञ्चालन १२ महिना पहिले
नागढुङ्गामा आफ्नै ट्रकले किचेर साहुको मृत्यु ७ महिना पहिले
वर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथको भोटो आज देखाइदै २ वर्ष पहिले